Ka ilaali barta Instagram Hacksaacadaha | Ka ilaali in koontadaada la xado
Inicio/Talo soo jeedin/tutorial/Instagram: Ku ilaali koontadaada 4 qaabab kala duwan
0 1.469 4 daqiiqo akhri
Haddii aad leedahay koonto Instagram, hubaal waad ogtahay in mid ka mid ah isbeddellada xilligan jira ay yihiin xatooyada xisaabaadka barxadda. Sababtaas awgeed maanta ayaan kuu sheegi doonnaa sida looga ilaaliyo barta Instagram hackW oodna si markaa koontadaada ay amaan u tahay oo aad ogtahay sida looga fogaado noqoshada hackeado on Instagram. Maqaal kale waxaan ku tusaynaa adiga qaabab kala duwan oo ah hacksameyso xisaab Instagram ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer caddeynnaa inaan u sameyno ujeedooyin tacliimeed, taas oo ah, si aan u barinno akhristayaashayada siyaabaha ay waxyeellada ugu geysan karaan. Ma dhiiri gelinno mana dhiiri gelinno hackdheg u yeelo astaan ​​ama akoon shabakad bulsheed kasta.
Waxaan dhamaanteen u nugul nahay inaan noqono dhibanayaal dad ujeedadoodu xun tahay oo doonaya inay ka faa'iideystaan ​​nacasnimada kuwa badan. Nidaamka ay adeegsadaan badanaa lama oga, taasoo keenta dhibbanayaasha inay ku dhacaan dabinka.
Qaabka ay u shaqeeyaan ayaa ah inay kuu soo diraan DM oo fariin gaaban lagu muujiyo ka dibna xiriir, oo badanaa yimaada ku daboolid gaabin url. Tan si aynaan u arki karin halka ugu dambaysa ee bogga aan gelayno. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in lagu tuso sida loo hagaajiyo amniga koontadaada 'Instagram'.
Waxaan kugula talineynaa inaad aragto sida loo arko qoraalo aad LIKE ku leedahay barta Instagram
Wax muhiim ah waa inaad ogaataa kahor barashada sida looga ilaaliyo barta Instagram Hacksanadaha waa kuwan soo socda:
Mar alla markii aad gasho xiriirkan dib ugama laabaneyso, maxaa yeelay waa bootooyin loo qorsheeyay inay keydiyaan dhammaan macluumaadka koontada, oo ay ku jiraan magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah, ee keydka xogta. Tani waa mid ka mid ah hababka ugu isticmaalka badan toddobaadyadii la soo dhaafay.
Xaqiiqdii, dad badan ayaa ku dhacaya khiyaanadan oo ay sidaas darteed lumisay xisaabaadkoodii. Dib u soo kabashada isla waa mid dhib badan, maaddaama xogta helitaanka si dhakhso leh loo beddelo. Si kastaba ha noqotee, si arrimahan aysan u sii soconin inay dhacaan, waxaan isla markiiba ku bari doonnaa siyaabaha looga hortago hackeen xisaabtaada Instagram-ka oo aadan haysan waqtigaas adag.
Sida looga fogaado noqoshada hackeado barta Instagram
Fiiro gaar ah u yeelo talaabooyinkan aan kugu tusayno sawirro si aad ugu fahamto sida ugu fiican:
1- HA FURIN farriimaha ay ka heleen shisheeyaha
Habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo dhibka noocan ah marwalba waa ka hortag, sidaa darteed, haddii aad ka hesho fariin Instagram ah (DM) koonto aadan aqoon HA FURIN!
Kiiska kale ee muhiimka ah in la xuso ayaa ah in mararka qaarkood isku xirka xaasidnimada ah uu ka yimaado koontada mid ka mid ah saaxiibadeena. Taas macnaheedu maaha inuu isagu yahay kan doonaya inuu wax yeelo. Waxa dhacaya ayaa ah in markii bot laga furo akoonka, isla markiiba uu ku dhaco, taasoo keenta in iskuxirka loo diro dhammaan kuwa raacsan koontadaas.
Miyaad garwaaqsatay heerka fiditaanka ee nashaadaadyada noocan ahi leeyihiin? Sababtaas awgeed, tirada dadka la noqonayo hackeadas on Instagram.
2- Mamnuuca in lagu daro kooxo aan lagaraneyn si loo ilaaliyo koontadaada Instagram
Talooyinka kale ee ugu fiican ee aan ku siin karno ayaa ah inaad ilaaliso koontadaada sida ugu macquulsan. Mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya ayaa ah inaad ka xannibeyso gelitaanka kooxaha, tan waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Gali dejinta koontadaada oo gal qaybta asturnaanta.
Hadda geli qaybta farriimaha.
Xulo xulashada "yaa kugu dari kara kooxaha".
Hada xulashooyinka waa inaad doorataa "kaliya dadka aad raacdo".
MUHIIM MUHIIM AH: Tallaabadan gudaheeda, sida aad ku arki karto sawirka saddexaad, waxaad u qaabeyn kartaa soo dhaweynta farriimaha sida aad doorbideyso, taas oo ah, waxaad dooran kartaa inaad ka hesho fariimo qof walba, ama kaliya kuwa raacsan ama xitaa bogagga sida Facebook. Wax walba waxay ku habboon yihiin iyo ujeeddada aad rabto inaad ku hesho koontadaada.
3- Firfircoonida xaqiijinta 2-tallaabo ah
Qaybta kale ee casharka ayaa ah inaad dhaqaajiso ikhtiyaarka si aad ugu xaqiijiso koontadaada laba talaabo. Si tan loo sameeyo, raac talaabooyinka soo socda oo kaa caawin doona ilaali xisaabtaada Instagram:
Gali dejinta koontadaada.
Hadda aagga badbaadada.
Waqtigan xaadirka ah waa inaad dhaqaajisaa xaqiijinta 2-tallaabo oo aad raacdaa tilmaamaha nidaamka uu ku weydiisto.
Talaabadan, markasta oo aad gasho qalab kale, waxay ku weydiin doontaa inaad ku qorto koodh, aad ayey muhiim u tahay in talaabadan la helo SHAQAYSAY.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad aragto: Sida loo basaaso sheekooyinka Instagram iyaga oo aan dareemin
4- Sida loo qaabeeyo ama loo dhigo xisaabteyda gaarka ah ee 'Instagram'
Aan marka hore u gudubno qaabeynta
Markaa si iskaa-wax-u-qabso ah
Iyo si aan u dhammeyno waxaan ku SHAQAYNAYnaa badhanka xisaabtanka gaarka ah.
XUSUUS MUHIIM AH: Si loo dhigo koontadaada gaarka ah, waa inaysan noqon xisaab ganacsi. Si aad u ilaaliso koontadaada oo aad uga dhigto mid gaar ah, waa in si gaar ah loogu qaabeeyaa koonto shaqsiyeed.
Sida aad u aragto, ficilada la fulin karo si loo ilaaliyo koontadaada oo aad u ogaato sida looga fogaado noqoshada hackeado on Instagram waa wax fudud oo dhakhso badan. Xusuusnow inaad ka ilaaliso barta Instagram hackers waa shaqada dhammaan milkiilayaasha koontada waana macluumaadkaaga shakhsiyeed. Laakiin kahor intaanan bilaabin, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto kuweenna Beesha khilaaf. Halka aad ka heli karto tiknoolajiyada ugu dambeysa iyo xogta ciyaaraha.
dhaqaaji xaqiijinta laba-tallaabo instagram sida loo noqon maayo hackeado on instagram samee tallaabooyinkeyga koontada gaarka ah dooro cidda ii soo diri karta farriimaha instagram dooro cidda aragtay sheekooyinkayga Ka ilaali xisaabteyda instagram-ka in la xado iska jir ahaansho hackeado on instagram Ka dhig koontadayda 'instagram' mid gaar ah talaabooyinka xisaabtaada gaarka ah la dhigo dhig koontada instagram-ka ee gaarka loo leeyahay ilaali instagram Ka ilaali barta Instagram HackW oodna soo celi koontada instagram barashada instagram
Lambarka Virtual ee WhatsApp, sidee loo abuuraa?